Ahoana no fiasan'ny fitsapana amin'ny fotoana ekipa? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Fitsapana amin'ny fotoana ekipa - ny fomba fanapahana hevitra
Fitsapana amin'ny fotoana ekipa - ny fomba fanapahana hevitra
Ahoana ny fomba fiasan'ny andrana ekipa?
nyFitsarana amin'ny fotoana ekipa(TTT) dia hazakazaka bisikileta miorina amin'ny arabeekipamihazakazaka mifaninana amin'ny famantaranandro ny bisikileta (jereo ny tsirairayfitsarana fotoanaho an'ny famaritana amin'ny antsipiriany kokoa ny hetsika ITT). Aorian'ny anjarany dia hihodinkodina ilay mpitondra mitaingina kalesy, hamela ny mpitaingina manaraka hitarika, raha ny mpitarika kosa mankany aorinan'ilayekipa.
Ny ekipa BMC dia iray amin'ireo, raha tsy ny hery natanjaka indrindra tamin'ny andrana ekipa tao anatin'ny taona vitsivitsy, ary manana tombony izahay hanaraka azy ireo anio rehefa miomana amin'ny andrana ekipa fanokafana ao La Vuelta (mozika rock elektronika upbeat) ianao Marco Pinotti, fantatra amin'ny anarana hoe mpitaingina azy The Professor. Azo antoka fa niaina izany anarana izany izy hatramin'ny nisotroany ronono ary ampahany manan-danja amin'ny ekipa fampisehoana eto amin'ny BMC - Eny, miasa amin'ny maha mpanazatra ahy aho ary manokana amin'ny fiofanana momba ny fotoam-pitsarana sy ny fizahan-toetra amin'ny ekipa, ka izany no antony nahatongavako teto any Espana dia andao hanaraka tsara ny ekipa. Mametraka ezaka ianao amin'ny andrana ekipa anio.
Omeo anay ny hevitra ao ambadik'ity ezaka ity amin'ny fizotran'ny fampiharana ankehitriny. - Ie, ny hevitra fototra dia ny fampatsiahivana azy ireo fotsiny hoe karazana hazakaza no hoentin'izy ireo ny sabotsy ho avy izao. Manao izany be dia be isika amin'ny toby fiofanana sy amin'ny fotoana hafa amin'ny taona.
Fa ireo mpitaingina manokana ireo dia mbola tsy niaraka mihitsy, ka tsara raha manana izany fahatsapana izany indray, hatanjaka ary handeha teknika. Fampahatsiahivana fotsiny. Ary avy eo azontsika ny hevitry ny làlana, na dia teknika kokoa noho ny fampiasantsika androany aza ny lalam-pifandraisana Sabotsy satria misokatra ny fifamoivoizana - Tianao ny fitsapana fotoana tsara, sa tsy izany? Samy fisedrana ny fotoan'ny tsirairay sy ny ekipa.
Tracker fanatanjahan-tena bisikileta
Tena mahomby amin'ny roa tonta, fa inona ny tsiambaratelon'ny fitsapana fotoana ekipa tsara? - Eny, tsy maintsy manomboka haingana ianao, fa tsy adala, noho izany dia tena fandrefesana ny ezaka amin'ny maha ekipa anao, ary tena hitazomana ny fandehan'ny zavatra milamina haingana.
Lazao raha mandalo fiolahana na havoana io, alao antoka toy ny fanenjehana ekipa iray izany.
Te handeha haingana toy ny mpitaingina anao miadana ianao, ary rehefa tsy maintsy miampita ny tsipika fahatongavana amin'ny efatra ianao dia mandeha haingana toa ilay mitaingenan'ny fahefatra anao. Midika izany fa indraindray ianao dia tsy mila mihazona rehefa misy mpihanika ao amin'ny ekipa izay tsy ao anatin'ny fotoam-pitsarana? Samy manao asa mitovy amin'ny olon-drehetra ny tsirairay, mifototra amin'ny fahaizany manokana. - Tamin'ny alàlan'ny fampiofanana dia hitantsika fa tsy dia mafy toy izany koa ny zavatra hitanay.
Nanana andraikitra lehibe izy ireo ary manana izany manerana ny ekipa izahay. Ny ankamaroan'ny mpamily izay niara-nandresy tamin'ny fanandramana tamin'ny ekipa niaraka taminay. Midika izany fa tsy mandresy isika satria manana mpamily sasany ary mampiofana betsaka - fanontaniana iray liana amin'ny valiny.
Eto La Vuelta dia somary lava ny bandy tovolahy, saingy indraindray dia tsy fitoviana lehibe amin'ny haben'ny mpamily. Ka amin'ity toe-javatra ity, ahoana ny fametrahana ny filaharana eny an-dalana satria mazava ho azy fa ny mpamily lehibe dia tsy hanana izany ao aorianao hisarihana mpihanika kely. - Eny, miankina amin'ny zotra io, fa aleo lazaina ny lalana mahitsy sy mahitsy.
Amin'ny tranga henjana dia manapa-kevitra mihitsy izahay fa tsy hisintona toy ny tamin'ny taon-dasa ny mpamily. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny fipetrahana fotsiny ary ny toerana farany dia asa tena tsara, ary miala kely fotsiny na mitana andraikitra iray amin'ny tapany iray amin'ny hazakazaka, izay manakaiky ny iray hafa. (mozika rock elektronika faly) - Tokony holazaiko fa mahavariana tokoa eo akaiky eo.
Ny tiako holazaina dia tsara daholo ny mandrara ireo isa ireo toy ny 60 km isan'ora eny amin'ny fisaka, fa izany no ataontsika dieny izao amin'ny làlana fisaka iray tanteraka ankehitriny amin'ny fiofanana amin'ny hafainganana eto. Fa toy ny tononkalo mihetsika izy io, malama fotsiny izy ireo. (mozika rock elektronika faly) Jürgen Landrie ity.
Izy dia mpiara-miasa amiko taloha tamin'ny 2004, efa ela izay. Mekanika fampisehoana izy izao ary miasa amin'ireo bisikileta andrana fotsiny ihany, izay zavatra tsy manam-paharoa amin'ny hevitro, ary miasa amin'ny bisikileta rehetra hatrany amin'ny bisikileta TT manerantany? - Tsara izany nanomboka roa taona lasa izay satria izany dia sarotra foana rehefa manana Grand Tour sy ny bisikileta fitsapana ao anaty kamio ianao ary mandray toerana be loatra. Ka ho ahy dia ny bisikileta fanandramana fotsiny no niantombohan'ny asako, ary avy eo dia mandeha amin'ny antsipiriany amin'ny bisikileta rehetra ianao, ary avy eo nahazoako an'io asa io avy amin'ny ekipa mba hifantoka fotsiny amin'ny fitsapana fotoana - satria lasa aerodynamika bebe kokoa ireo bisikileta. ary endrika malefaka kokoa, angamba somary sarotra kokoa ny miasa aminy. - Eny, satria ao daholo ireo tariby.
Mazava ho azy fa tombony ho an'ny aerodynamika izany, saingy ny olana dia tsy hitanao izay mitranga ao anatiny ka tena zavatra tokony hifantohanao izany.- Ny bisikiletanay rehetra dia lavorary izay nanontanian'i Jürgen. Ary tena marina tokoa tsy afaka ny ho tsara noho isika raha resaka fitaovana.
Manana ny kodiarana tsara indrindra vitantsika izahay ary ny bisikileta no
Niasa tao amin'ny tionelin'ny rivotra nandritra ny efa-taona izy ireo mba hamolavola ity milina vaovao ity ka tsy manana fialan-tsiny izahay. Ao ambadiky ny sehatra dia miasa mafy tokoa izy ireo mba hahazoana antoka fa haingana ny bisikileta ary indrindra amin'ny tenako dia nanao fitsapana betsaka tamin'ny tionelina rivotra izy ireo, teny an-dalana, ho an'ny fiarovan-doha, akanjo hoditra sy ny sisa rehetra. Ka tsy manana fialan-tsiny ankoatr'izay fa tsy niofana mafy aho - Miaraka amin'ny pitsopitson'ity fizaran-tany ity amin'ny asabotsy, tena matanjaka ara-teknika hatrany am-piandohana zoro vitsivitsy amin'ny farany koa, ka tsy misy izany fotoana betsaka izany ho an'ireo mpamily. tena mahazo ny fampisehoana Ka inona ny paikady amin'ny zavatra toa an'io? - Ie, nanome hevitra tsara ianao, aleo aloha jerena ny làlana rehefa mikatona ny asabotsy satria toa teknika kokoa noho izy io io.
ny fomba fanaovana crunches cross crunches
Saingy io dia lalana iray izay tsy hitanao mihitsy ny gadon'ilay toa azy. Ka ho
Heveriko fa ho kely kokoa ny elanelana misy eo amin'ny ekipa ary mety mila mampiasa mpitaingin-tsoavaly maro kokoa izay manana fahaiza-manao mitondra fiara amin'ny bisikileta fitsapana isika.- Ny fanontaniana iray farany tao amin'ny Rohan Dennis du 'Manana iray amin'ireo mpitaingina andrana mafy indrindra isaky ny fotoana aho ao amin'ny World. Indraindray mety hanahirana ny fananana tovolahy matanjaka toy izany mandritra ny fotoana fitsapana ekipa.
Azony apetraka amin'ny mena ve ny hafa? - Andao lazaina fotsiny fa aleoko manana Rohan Dennis toy izay tsy manana azy. (chuckles) - Misaotra betsaka avy amin'ny GCN Team BMC namela anay hanaraka azy ireo tamin'io maraina io. Manantena aho fa nahita izany ho mahaliana toa ahy ianao.
Mahagaga ny mijery azy ireo eo am-pihetsiketsehana tanteraka eny an-dalana na dia amin'ny fomba fampiofanana aza hoy aho. Raha mbola tsy nisoratra anarana amin'ny Global Cycling Network ianao dia azonao atao izao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny tany. Raha te hahalala misimisy kokoa momba ny fisokafana ianao Raha te hahita ny andrana ekipa hatrehana amin'ny asabotsy dia azonao atao ny manindry ity zoro eto ambany ity, na raha te hijery ny fampisehoana farany GCN ianao dia afaka mahita azy etsy ambany.
Firy ny mpitaingin-tsoavaly ao anatin'ny fitsaram-potoana amin'ny ekipa?
rehetraekipatokony hamita dimy farafaharatsinympitainginahahazoana tompon'andraikitrafotoana. nyfotoanany fahadimympitainginamiampita ny tsipika mamaritra nyekipafamarananafotoana.
Eny, ho somary mahamenatra ity andiana andrana ekipa ekipa ity, nifaninana tamin'ny Cyanus TT Bike izaho sy i Hank ary diso fanantenana tanteraka izahay, nandiso fanantenana izany, avy eo napetraka teo amin'ny lampihazo Nanatevin-daharana kely izahay ary resy indray izahay, fa izao Manon Eto, miaraka amin'ny fahaizanao mihazakazaka deinsprint izay tiako holazaina, farany azontsika atao ny mamadika ny fifanolanana ho antsika ary mamafa ny tarehy ilay tsiky izay holazaiko fa diso fanantenana be anao aho. Navelako ny namanao, navelan'ny fianakavianao ny mpijery, fa tsy eto aho hamily fa eto aho nefa ny talen'ny ekipanao fanatanjahan-tena izao dia miroso amin'ny filaharana ollie tsy hilatsaka ianao, amin'ity indray mandeha ity dia tsara noho ianao Hitako fa tonga aminao ny isa nomen'ialahy gotthisalex ianao no ex-pro vaovao indrindra manantena zavatra lehibe avy aminao, turncome lehibe ianao, ajanony ny fitroarana, miaraka ianao, avia, andramo fotsiny ny tsy ho eo am-baravaran'ny trano fitahirizana. zana-tsipìka zana-tsipìka, fa iza no olana amin'i ryder eto, miverina izahay avy eo ho an'ny tovolahy bebe kokoa impiry impiry aho no nikapoka anao izao. Fantatrao ve fa mandihy ianao fa ho eto mandritra ny tontolo andro isika, tsy hanao ny marina ve isika, tsia, tiako holazaina, mahafinaritra izany, Connor? fa tafaverina ianao dia efa fantatrao fa hanandrana indray ianao Heveriko fa tena ho gaga ny mpanatrika fantatrao ny fombanao mandresy ny faharetana Heveriko fa tsara izany eny dimy amin'ny olona iray amin'ny bisikileta TT any no alehanao izay mpitaingina fahadimy izao Liana ve ianao Tsy miala tsiny Izahay dia manana pro eo afovoantsika Rory Townsendfrom Canyon dhb sun andriamanitra tiako holazaina, jereo, ity dia santionany nisolo tena ny fireneny Irlandy tamin'ny hazakazaka tompon-daka eran-tany ary nandrombaka ny lobaka sprint tamin'ny fitsidihan'i Great Britain toa ny an'i Alex Payton. Welcomemate manokana no tiako holazaina dia hoe eny eny mafy be izany satria avela ho azontsika mazava ho azy fa ny fiafaran'ny pejy dia hitanao fa fantatrao satria tsara izy fa tsara izy ka izany no mahatonga azy manana ny ekipantsika Hanimba azy izany fa tsy handresy isika, ny tiako holazaina dia ny farany hamaranana ity andiany ity ary tianao ny hitsikitsiky ny tavanao ho tsara izany ahoana no fandraisanao anjara amin'ity ekipa mpanao andrana ekipa mpanao andrana malaza ity fa nampiofana fotsiny aho ary avy eo dia niantso ahy ary nanontany aho ho fanasoavana ary eto aho, fa tsy fantatro izay tena ataoko, ahoana no mampiditra an'ity ekipa ity mandritra ny fandaharam-potoanan'ny hazakazaka tsy tena inona ilay loko tianao indrindra inona no endrika eny fa tsara tokoa nandaniako enim-bolana tany calpeum ary tamin'ny herinandro lasa aho nahavita cresta arivo watts nandritra ny 30 segaondra ka tonga fotsiny aho tamin'ny drafitra fanazaran-tena nandritra ny fito herinandro tao Zwift ary raha ny marina dia nahatoky tena aho androany ary avy eo dia azoko ny fahaizako ary omaly nalefany aho fiara 140 km mankany amin'ny morontsiraka tsara no somary reraka tamin'ity maraina ity, tsy maintsy nitondra fiara teto koa aho, satria uhstacey dia tsy maintsy nitondra fiara nankany amin'ireo fivarotana tamin'ny andriamanitra fiara izay nanomanako tena tsara ho an'ny androany, satria omaly dia turkey 20 minitra aho no nitondra fiara , nanao sprint ary avy eo nihinana pizza, tsy dia niomana firy tao amiko, nitondra 150 km avy tany bristol nankany weymouth aho, fiakarana roa 25 minitra ary, hoy fotsiny, marary ny tongotra, ny Somary ok ny fiomanana, nentiko ny kodiarako lalina tamin'ity indray mitoraka ity izay tokony hanampy amin'ny hariva Na dia nisy milina maivana kely aza avy teo am-baravarankely, dia nianjera aho ka toa tsy maintsy noraketiko ny fantsom-bokoko tamin'ny farany ary mety ho fito watts telo ny lokon'ny manga tsara tonga teo amin'ny tsipika fanombohana izao dia maharitra ela fotoana handehanana manoloana ireo mpitaingina ofisialy, okay, isika ve? vonona ianao vonona ry zalahy, telo telo-in-iray tongava ô ollie mijanona amin'ny bisikileta oh tsia olliedon aza avela hilatsaka ianao ollie amin'ny lehilahy lehilahy manana baolina eo ianao dia mandeha izay ho avy olona ananantsika izao andriamanitro ianao abs olute biby fantatro fa ho hitako fa sarotra izany, tsara ho an'izany i roryi dia nanao ny marina tamin'ilay zavatra rehetra izay farany ambony dia matanjaka be ity bandy ity ao anaty headwind ao amin'ny headwind dia 30 kilometatra isan'ora no anananao miolakolaka amin'ny fidinana lehibe eo alohan'ilay kely nanamboatra làlana ary teo an-damosiko aho tahaka ny omaly hariva dia nieritreritra aho fa mety ho voadona ny enina saingy omeko sary tsara indrindra izany satria hitanao fa niova kely ny bisikiletako ary mbola ilay albaya audu ihany Ttbike, saingy misy kodiarana lalindalina kokoa eo amboniny, mbola vitako ihany ve izany? Aza mahazo kodiarana kapila eritreretinao fa ny Zip dia nandefa olona tamim-pahamoram-panahy 808nsws haingana ary ho azy ireo dia napetrako tamina hazakazaka vaovao Pirelli P0 vaovao niaraka tamin'ny 26 Milwide fa ny masinina dia ny motera, tiako ary tadiaviko izany. fa manao fampiofanana tena izy, saingy toa mandeha ny fotoana, ka manodidina teo izahay nahavita nitondra fiara 90 kilaometatra omaly, dia olona vorpokay tonga lafatra mba hanaja kely an'ireo atleta eny an-dalana izao miala tsiny efa vita yeahmateokay mazava niverina tamin'io farany io fotoana charme miala tsiny easytiger okay okay tsy handeha lavitra izany fa ho hitantsika, vita telo roa iray okay tonga eo fa izany ry zalahy efa mba nanontany tena ve ianao raha misy mpitaingina bisikileta tt hanao izany tena haingana noho ny mpitaingina roa eny an-dalana bisikileta miara-miasa dia tsy afaka manontany tena aho hoe inona no tsy haiko ary hank nahavita ilay taranja tao anatin'ny 13 minitra 40 segondra 12 minitra 55 segondra nakatona daholo izay ilaintsika dia mpamily fanampiny Alexpattonschönehome manohy hatramin'ny farany ankehitriny12 minitra 48 segondra nandeha aho fifadian-kanina faharoa r noho ny fotoana farany13 16. oh ny teniko tsara tsy fantatro hoe firy no ilaina hanodinkodina ny fotoana fitsapana tadiavinao amin'ny manaraka apeloton ary ankehitriny misy olona matotra efatra heveriko fa fotoana tokony hialana izao dia efa nandray tsara isika Ollie Bridgewood people Ahoana no tokony ho fijeriko milay sy matanjaka amin'ity mozika ity? Nandritra ny 30 minitra sy iray segondra no nanaovanay izany? haingana kokoa noho ny omaly 12 mn 59 dia roa segondra oh andriamanitro efa vonona daholo ny karatra napetraka rangahy manana ny valiny marina ny nataony omaly alina tsia tsy io no miadana indrindra fa sambany aho tamin'ny 13 am heveriko oh angamba tongotry ny sabatra omaly ary ny zazalahy dia efa hanana izay ananantsika 12 noho 37 oh vita izay dia vita ny lalao fair fair play zazalahy izay midika fa nahemotra satria tsy toy ny fandresena androany, ny no haingana indrindra tamin'ity lalana manokana ity ka lalao ara-drariny ity dia haingana tokoa misaotra anao noho ny fijanonanao aminay roa ka hatramin'ny telo ka hatramin'ny efatra ka hatramin'ny dimy azafady mba omeo ankihibe ny zalahy satria epic izany, saingy tsy hikasika an'i Sancho intsony aho.
Ahoana ny fomba handehananao ny fotoana fitsapana ekipa?
Misintona tanjaka sy halava: ny misintona eo aloha dia tokony ho tsy miova ary mitazona ny ezaka nifanarahana. Aza atao misavoana na dia nyhafainganam-pandehamora mahatsapa. matanjakaTTmaharitra ela kokoa izy ireo, misintona kokoa hatrany amin'ny ankapobeny fa tsy sarotra. Ny fisarihana lava kokoa dia tokony ho lava ihany mba hitazomana nyhafainganam-pandehamaharitra sy matanjaka.
Amin'ny maha tompona firaketana an-tsoratra an'izao tontolo izao ahy sy tompon-daka eropeana, Victor Campenearts avy ao Lotto-Soudal, manafana ny fotoam-panokafana ny Giro d'Italia, nieritreritra aho fa handeha manodidina ary hanontany mpanazatra vitsivitsy, angamba mpamily ary talen'ny fanatanjahantena, inona izany? Ny protokolom-panafanana dia amin'ny taona 2019. Hafiriana no ataonao? Inona no ataonao? Mandra-pahoviana alohan'ny fiantombohan'ny fijanonany? Manao milamina ve ianao? (mozika EDM mavitrika) Inona no tena fototry ny siansa? Hetsika famanam-batana? - Mila mampihetsika ny rafitra rehetra ilainao ianao amin'ny fitsapana fotoana. Raha ny marina, ho an'ny fanafanana, izany no izy.
Ary manana kitay iray manontolo amin'izany izahay, ao anatin'izany ny sakafo, ao anatin'izany ny tavoahangy, bara, ka misy fandaharam-potoana iray manontolo mandra-pialanao amin'ny roller, dia vonona ny hanomboka ianao ary hanao ny fotoam-pitsarana anao - ary ny iray manafana ho an'ny fizahan-toetra dia tsy mitovy raha teo am-piandohan'ny Grand Tour raha oharina amin'ny andro farany na raha faharetana hafa amin'ny fotoam-pitsarana? - Tsia, tsia, tsia, tsy izany mihitsy. Ny tsy itovizany dia miatrika fitsangantsanganana iray lehibe ianao izao, efa roa andro sy tapany mialoha ianao, eto ianao. Ianao dia efa afaka mahita ny Mazava ho azy fa tsy misy fefy eny an-dalambe. Ka efa fantatrao izay miandry anao, betsaka noho ianao, raha mandritra ny hazakazaka an-tsehatra iray na mandritra ny iray amin'ireo TT mandritra ny fitsangatsanganana lehibe - ary amin'ny resaka hafanana izay omen'i Tom ohatra anio amin'ny fanokafana hanao fotoana ny fitsarana, haharitra hafiriana ary inona? ny ezaka hataony eo am-panafana? - Tsy ho ela.
Maharitra 20 minitra eo ho eo. Hanao sprint vitsivitsy izy. Hanao ezaka vitsivitsy izy.
Ka, eny, 20 minitra eo ho eo io vao vita. (Hypnotic music) - Fanafana ny andrana, dimy kilaometatra androany. Inona no protokolonao hahatongavanao? - Fohy fohy, 20 minitra angamba.
Manomboha mora ary mandrosoa, andao lazaina hoe 10 minitra, mora kely ary avy eo indray ny dimy minitra farany ary elanelam-potoana fohy fohy kokoa, ary manantena aho fa vonona hidina lalina ny vatako - ary miova ny protokoloka mandritra ny fotoana fohy kokoa mifanohitra amin'ny fitsapana fotoana lava kokoa sa amin'ny andro voalohany manohitra ny andro farany? - Ie, azo antoka. Raha fintinina dia ilaina izany, raha tsy izany dia maharary be loatra, fa angamba mandritra ny fotoana lava, azo atao izany satria fanombohana mora kokoa izany ka tsy mahazo mihodinkodina akory aho. Mandeha amin'ny tsipika fanombohana fotsiny aho ary - Tena? - Ie, eny, azo atao izany.
Ny tiako holazaina dia tsy mieritreritra anao any Paris-Nice akory aho raha tsy manafana ny roulons mba hanombohana - ary ahoana ny mahasamihafa ny lalana sy ny làlana? Mazava ho azy fa tompon-daka eran'izao tontolo izao amin'ny làlambe, manao hetsika marobe ianao, noho izany mila fanazaran-tena mafana dia tsy hitovy amin'izany.- Tsia. Ny prologue mifanohitra amin'ny warm-up ho an'ny hazakazaka isa na inona, mitovy ihany izy io.
Ny tiako holazaina dia hazakazaka fohy ihany koa. Tokony ho vonona hatrany am-piandohana ianao, hamaly ny fanafihana hatrany am-piandohana, dia toy izany koa ny hafanana. Manodidina ny 20 minitra, 25 minitra, ny fanafanana rehetra.
Mahavita 50 minitra alohan'ny iray ianao dia miditra ao anatiny. Fa raha manao ny omnium aho rehefa manana hafana mahazatra, dia mety tsy hanao hafanana amin'ny hazakazaka faharoa aho satria amin'izay dia ho salama saina aho ary handeha foana ary raha manomboka mifintina aho dia ' handre izany aho. Ka, handratra indray mandeha, dia ampy izay.
Ary farany, nilamina, mazava ho azy fa zavatra izay tsy mbola hitantsika tao amin'ny peloton 10 taona lasa. Izao ny ankamaroan'ny olona. Mpankafy mahafinaritra ve ianao? Rano - Tsia, tsia.
Mbola mahita olona marobe milomano aho, indrindra rehefa avy any an-tendrombohitra na koa mihazakazaka, fa ny taona lasa, ny roa taona lasa, dia Orica. Nolazainao fa izao aorian'ny fanombohan'ny tsipika fahatongavana. (mozika hypnotic) - Mafana androany, zavatra voalohany.
fampiofanana amin'ny mpampiofana bisikileta
Faharoa, nanao scout izy ireo anio tolakandro satria tsy nikatona ny lalana ny maraina, ka ny tolakandro no nampiasain'izy ireo hanamboarana ny scout minitra vitsy lasa izay. Ka tena tsy mila manao fanafanana lava. Eny ary mba ho hitanao fa hanafana ireo mpitaingin-tsoavaly mandritra ny 25 minitra ary avy eo mijanona izy ireo, ary manana dimy minitra hanovana akanjo izy ireo, hitafy ny aroloha, ary avy eo 15 minitra hafa hanombohana satria androany Mbola izao ve lavitra.
Ka 25 minitra amin'ny roul. Dimy na enim-bolana eo ho eo fotsiny, manafana ny roulons. Avy eo dia manao fandrosoana vitsivitsy izy ireo.
Avy eo dia miala sasatra kely izy ireo avy eo ary manamboatra hafainganam-pandeha roa eo anelanelan'ny 10, 15 segondra. Ary mazava ho azy fa asa matihanina nahomby ve ianao? - Mieritreritra be aho. Ny tiako holazaina dia tadidiko ny nitondra fiara scooter nandritra ny adiny iray lasa izay ary nahatonga antsika adala.
Ary izao, fantatrao, tena mieritreritra ny fahasosoran'ny mpamily izahay. Ary tsy manao an'izany isika. Tena tianay izy ireo hahavery ranon-javatra be dia be ka mampiasa ny mpankafy, mampiasa palitao ranomandry izahay hiezaka hitazona ny hafanan'ny vatana faran'izay ambany araka izay azo atao, fa manafana ny hozatra, izany no tanjon'ny hafanana- Mihevitra aho fa mila milamina, toy ny britanika voafantina any ivelany indray aho, misy handrina ny handriny ary hatoka ny hatoka, ka manantena aho fa nankafizinao ity lahatsoratra ity ary nianatra zavatra momba ny fomba anafanan'izy ireo mpamily amin'ny 2019 mandritra ny fitsapana ara-potoana. toy ny anio.
Raha tianao izany dia miangavy azafady manisy fehiloha, eto ambanin'ity lahatsoratra ity fotsiny. Ary raha mila atiny bebe kokoa avy amin'ny Giro ianao dia manana ny sasany amin'ireo teknolojia fitsapana farany farany ho anao eto izahay.
Ahoana ny fomba fiasan'ny andrana ekipa any Tour de France?
Ilay olonafitsarana fotoana, izay mandrafitra ny roaTour de FranceTTs amin'ity taona ity, jereo ny mpifaninana tsirairay hifaninana irery amin'ny famataran'ora nefa tsy misy tombony azo amin'ny fivezivezena, fa ny TTT kosa mahita aekipany mpitaingina (avy amin'ny roa ka hatramin'ny 10) mihazakazaka ho toy ny singa iray hamita ny hazakazaka amin'ny haingana indrindrafotoana.28. 2021.
Impiry aho no tokony hanao fitsapana amin'ny fotoana?
Araka ny soso-kevitr'i Helgerud dia tsy mila izany ianaonymihazakazakafitsapana amin'ny fotoanafisaka daholofotoana. Fa aleo ferana izanynyindray mandeha isam-bolana ary amin'ny herinandro hafa dia andramo ny fivoriana maharitra elanelam-potoana Helgerud na tantano nyFitsapanatoy ny hazakazaka tempo dia mihazakazaha amin'ny antsasaky ny hazakazaka marathon ary jereo hoe lasa mora kokoa izany rehefa nandeha ny herinandro.06.12.2007
Inona no haingana tokony hataoko amin'ny fitsarana?
Amin'ny ankabeazany, te-hihazakazaka mandroso ianao mandritra ny androm-piainanaofitsarana fotoana, fa tsy te hivoaka koa ianaofifadian-kaninana koa. Raha manao 2-kilaometatra ianaofitsarana fotoana, ohatra, mamita ny antsasa-kilaonao voalohany manodidina ny 5k hafainganam-pandehanaoveho safidy hendry.
Hetsika inona no fitsapana ny hafainganam-pandeha sy ny fiaraha-miasa raha ekipa telo lahy no miara-miasa?
nyEkipaSprint dia afitsapana ny hafainganana sy ny fiaraha-miasa ekipa telo-ekipa lehilahy miara-miasahandefa ny fotoana haingana indrindra mihoatra ny 750 metatra. Ny fihodinana voalohany dia mamaritra ny valo haingana indrindraekipaizay hiakatra amin'ny fihodinana voalohany.1. 2020.
vokatra azo avy amin'ny hen'omby
Ahoana no fiasan'ny fitsapana fotoana?
nyfitsarana fotoanana 'TT' dia hazakazaka mifanohitra amin'ny famantaranandro, raisina tsirairay na ekipa iray, fa tsy fanombohana faobe toa ny hitanao amin'ny hazakazaka amoron-dalana mahazatra. Samy mandefa izay tratry ny heriny ny tsirairayfotoanaamin'io làlana io, ary ny mpandresy dia ny mpitaingina (na ekipa) haingana indrindrafotoana.
Haingam-pandeha haingam-pandeha amin'ny tany lemaka: 25-28 mph
Ny bisikileta am-bisikileta tsotra dia manodidina ny 17-18 mph raha amin'ny tany lemaka. Ho an'ny atleta mpomba ny maro mihazakazaka ao amin'nyTour de France, mahay mitazona afifadian-kaninaNy haingam-pandeha amin'ny tany fisaka dia mamela azy ireo hijanona hifaninana amin'ireo atleta hafa fotsiny.
Inona ny 5k TT?
Tsotra araka ny feony, ny tanjon'ny afitsarana fotoanadia ny mihazakazaka halavirana voafaritra, amin'ity tranga ity5K, haingana araka izay vitanao. Raha atao am-pahatsorana, izany dia hanome anao famantarana tsara ny fahaizanao ankehitriny ary hanampy anao handamina fiofanana ho avy.01.04.2015
Impiry no isian'ny fitsapana amin'ny fotoana ekipa?
Ny fitsapana ora ataon'ny ekipa WTRL dia mitranga amin'ny Zwift amin'ny fotoana hazakazaka 16 isan-karazany isaky ny alakamisy ary mazàna mahita mpitaingin-tsoavaly 6000+ mifaninana amin'ny ekipa 1000+ izahay.
Rahoviana no manomboka ny ligin'ny platinum?
Ny ligin'ny WTRL Team Time Trial Platinum League dia nanomboka tamin'ny 23 aprily izay nanasana ireo ekipa 12 ambony isaky ny Kilasy Kafe tamin'ny herinandro lasa mba hifaninana mivantana amin'ny Zwift Community Live. Misoratra anarana amin'ny www.zwiftpower.com miaraka amin'ny haavony sy lanjany marina. (Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny ZwiftPower)
Inona avy ireo tanjon'ny fitsapana fotoana?
Ao anatin'ny fitsapana Time Trial (TT) tsirairay dia mikendry ny handehandeha haingana na amin'ny manodidina ny fahefan'ny faran'ny asany. Saingy amin'ny TTT, ny mpitaingina tsirairay dia hifandimby hisintona ny vondrona amin'ny hery ambony kokoa mandritra ny fotoana fohy. Ny tanjona dia ny hitazomana ny hafainganam-pandehan'ny ekipa, fa avo kokoa noho ny mpitaingina tsirairay afaka mitaingina irery.